सेरोफेरो : मैले भोगेको जिन्दगी
वरपर कोहि देखिनन् भने उनी माटो कोपरेर खाइहाल्थिन् । खान हुन्न भन्ने थाहा थियो । तर पनि ७ वर्ष सम्म पनि उनको यो बानी हटेन । हुन त उनका स्कुले दिन पनि सहज भने थिएनन् । कहिले भोकै स्कुल जानु पथ्र्यो त कहिले आधा पेट ।
उनका साथीहरू खेल्दा खेल्दा खल्तिबाट भुटेका मकै भुइँमा झरेको पत्तो पाउँदैन्थे रे । ‘तिनै भुँइका मकैका गेडा टिप्दै खाँदै हिडेको पनि याद छ,’ यति भन्दै उनी अब आलु काट्न थालिन् । सानै उमेर देखि उनका दिदी बहिनी आमासँग मेला हिड्थे । मल बोक्ने । मकै गोड्ने । भाँडा मोल्ने । यस्तै काममा खट्टीन्थे उनीहरू । बिहान घाँस दाउरा । दिउँसो स्कुल । साँझ एक्कैछिन भएपनि मेलापात । राती ११, १२ बजे सम्म उनीहरू आमासँगै बसेर ऊन काट्ने गर्थे । हप्ताको सात केजी सम्म ऊन तयार हुन्थ्यो । केजीको ३० रुपैयाँ आउँथ्यो । ‘आमा मिठाइ किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो,’ थापाले सम्झन् ि,‘हामी लुछाचुँडी गरेर खान्थ्यौं ।’
उनलाई अझै याद छ । उनकी एउटा मिल्ने साथी थिइन, सरिता । साथमा पैसा नभाकोले सरिताले झै राम्रो स्कुलमा पढन् पाइनन् उनले । कापी किताब जुटाउनुको समस्या सधैं रहन्थ्यो । अरूले पढेर पुराना बनाएका र खोलको ज्याकेट नओढेका किताब मात्र उनीहरूका भागमा पथ्र्यो । ‘कापी किन्ने पैसा हुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘एउटै कापीमा पाना छुट्टाएर धेरै विषयको होमवोर्क गर्थेँ ।’
घरमा केही न केही कुरामा बाबाले किचलो निकालीहाल्थे । आमा र बाबा बीच चर्काचर्की भएपछि कुटाकुट सुरु हुन्थ्यो । त्यसपछि रुवाबासी । आमा रुन थालेपछि उनका दिदीबहिनी र भाइ पनि रुन थाल्थे । ४ कक्षा पढ्दाको बेला । बाउआमाको झगडाले उग्र रुप लियो । आमा रुँदै माइत गइन् । अब भने उनीहरू आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थाले । पढ्ने किताब छैन् । बोक्ने झोला छैन । आमा थिइन्, तिनी पनि गइन् । ‘हामी स्कुलै जान छाड्यौं,’ उनले भनिन् ।
आमा नहुँदाको एक दिन् । भोकले रन्थनीयकी विमला आफन्तको घरमा गइन् । त्यही नामका मात्र आफन्त जसले उनको बाबाको सम्पत्ती हडपेका थिए । त्यस्ता आफन्तको मन कपास जस्तो कमलो के हुन्थ्यो । ‘के घिच्न आइस भन्दै भोकै लखेटे,’ उनले भनिन् । उनको मनमा त्यो तितो पल खिल बनेर गढ्यो । ९ महिना पछि आमा घर फर्किन् । उनीहरूका लागि किताब कापी जु¥यो । अर्को वर्ष फेरि उहि कक्षामा उनीहरूले भर्ना पाए ।
स्कुल भर्ना भएपनि आर्थिक अवस्था उही थियो । साथीहरू पकौंडा खान्थे । पुस्टकारी खाएर जिब्रो पड्काउँथे । विमला मुख मात्र मिठ्याउँथिन् । एक छाक मिठो खान पाए कस्तो हुन्थ्यो होला झै लाग्ने दिन पनि आए उनको जीवनमा । ‘मकैको ढिडो पानीसँग मुछेर खाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘ धन्न त्यती भएनि पाइयो, भोक लागेपछि मिठो नमिठोको केइ पत्तो हुँदोरैन्छ ।’
‘धन देखेसी मन कालो’ भन्छन् । ‘बाबाको जग्गा आफन्तले नै झुक्काएर खाइदिएका थिए,’ थापाले चुल्होमा कराइ बसालिन्, ‘त्यसैबेला देखि बाबा झोक्की हुन थाल्नुभाथ्यो ।’ यस्तै बेला बेलाँ रिसाइराख्ने र बेसुरे हुने बाबाको उपचार पनि होला भनेर आफन्तसँग उनीहरूले ५५ सालमा भारत पठाए । बाबा गएपछि भने घरमा अल्लि आनन्द भयो । ‘कमसेकम काम गरेसी सुखले खान पाइन्थ्यो,’ थापाले निधार फुकाइन् । ५५ सालमा दिदीको बिहे भो ।
बल्ल बल्ल एसएलसी परिक्षा दिइन् । पास भएपनि क्याम्पस पढ्नका लागि पैसै चाहिने । साथमा कौडी थिएन् । उनी जागिर खोज्न थालिन् । बिरगञ्जको एक संस्थामा जागिरको लागि आवेदन दिइन् । अन्तर्वाता भयो । नाम निस्कीयो । तर जागिर खान पाइनन् । कारण, राजधानीमा संघर्ष गर्दै गरेका उनका दाईले उतै बोलाएछन् । ‘यतै काम गर, यतै पढ् जान्ने सुन्ने भइन्छ,’ दाइले यति भनेपछि उनले कुरा काट्न सकिनन् । आमाले पनि दाइकै कुरा मान्न भनिन् । उनी सरासर राजधानी आइन् । ढुंगा र इँट्टाका घर । घरैघरको जंगल । उने धेरै पछि बुझिन्, यहाँ मान्छेको घरमात्र हैन मन पनि ढुंगाले बनेको हुन्छ ।
डिग्रीका खातहरू बेरोजगार पल्टेका शहरमा एसएलसी पनि नसकेकाले जागिर खोज्नु चानचुने कुरो थिएन् । बल्ल तल्ल पाएको जागिरमा पनि मासिक ३ हजारमा चित्त बुझाउनु पर्यो उनले । ८ देखि ५ बजेको समय । दिनहुँ खाना खाजा र गाडीभाडाको खर्च । उनलाई त्यो जागिर निल्नु न ओकल्नु भो ।
‘मैले त्यो छाडेर एक होटलमा काम गर्न थालेँ,’ तरकारी चलाउँदै उनले भनिन् । एक त भर्खरकी केटी मान्छे, त्यो पनि होटलमा वेटरको काम । ‘यौन पेशामा लाग थुप्रो पैसा कमाइन्छ भन्न थाले,’ उनी टक्क अडिइन्,‘बरू नाङलोमा मिठाइ बेचेर खान्छु तर यस्तो काम अर्दिन भने ।’
यहाँको कोलहालमा कस्ले सुखको सास फेर्न सक्थ्यो र ? उनी दिनानुदिन निस्सासीदै गइन् । ‘भाइसाब आज एक रातके लिए ओ लडेकीको मनादेना’ होटलका गेष्टको मुखबाट यस्तो सुन्नु त सामान्य कुरा थियो । मेरो पालो होटलको जागिर छाडेर स्कुल तिर लागेँ । बोर्डिङ स्कुलमा मासिक २ हजार । संघर्ष चल्दैथियो बाबा भारतबाट घर आइपुगेका र सिकिस्त बिरामी भ’का खबर उनले पाइन् ।
‘यो तासको महल बनाउने ठाउँ भन्दा गाउँ नै ठिक,’ उनी बाबालाई सम्झेर हटिया हानिइन् ।
२०६३ वैषाखको बेला । दिदीको बिहे भैसकेको थियो । बाबा सिकीस्त भएर भारतबाट घर आएका थिए । उनी पुगेको केही समय मै, बाबा बिते । दाजुभाइको आफ्नै सुर थियो । एसएलसीमा सेकेण्ड डिभीजन आउँदा पनि खुसी हुने ठाउँ थिएन् । उनको पढाइ त्यसै रोक्किएको थियो ।
२०६३ साल असोज महिनामा । आमा बिरामी परेर थलिइन् । कसरी उपचार गर्ने ? कहाँ गर्ने ? उनी निक्कै अन्योलमा परिन् । २२ हजारमा भैसी, १० हजारमा गाइ, १० हजारमा बाख्रा, बोका बेचेर आमाको उपचारमा खर्चिन उनले । जताततै उपचारका लागि भौतारिँदा पनि भएन । धेरैपछि आमालाई चितवनको क्यान्सर अस्पताल पु¥याउन भ्याइन उनले । जतिठाउँमा पुगेपछि अन्तत उनले आमाबाट आश मार्नु प¥यो ।
‘आमा मरिन भने म पनिसँगै मर्छु भन्दै डाक्टरसँग रुन्थेँ’, उनले भनिन्, ‘तर काल नआइ कोही अघि जाँदो रहेनछ ।’ रगतको नाता भन्दा भावनाको नाता ठूलो भन्ने कुरा उनले चितवन पुगेपछिमात्र बुझिन् । एक जना केटीसाथी र उनको दाइले उपचारका क्रममा गरेको सहयोग उनी सधैं सम्झिरहन्छीन् । बिभिन्न संस्थाहरूमा गरेको सानो सानो कामले उनले आमा उपचार गर्दाको ऋण पनि तिरीन् । आमा बितेपछि भाइको बिहे भो । सबैले आफ्नो बाटो समाते ।
आमाले भैसी किन्छु, दुध बेचेर तेरो लागि घर बनाउँछु । यसले दुःख पाउँछे । चार कठ्ठा यसका नाममा दिनु है, भन्थिन । मेरो माया लागेर त्यसो भन्थिन होला, तर उनको सपना पुरा भएन । आमा मरेपछि आफै पनि मरौं झै लाग्थ्यो । तर बिस्तारै मेरा सपनाका टुसाहरूपनि अंकुराउँदै गए । नेपाल परिवार नियोजन संघले व्युटीपार्लर सिक्नको लागि १० हजार दिएको थियो । हातमा सिप भएपछि केही गरिन्छ भनेर त्यसमा लागेँ । तालिमबाट बचेको पैसाले लागको ऋणको ब्याज तिरेँ । इक्वेल एक्सेस भन्ने उत्पादन संस्थाले रेडियो कार्यक्रमबारे उत्पादन सिकायो । रेकर्ड गर्ने । अन्तर्वाता लिने । अनि बिस्तारै मैले काम पाउन थाले । मेरा नाम एफएमबाट बज्न थाले ।
यसले सामाजिक छविमा मात्र राम्रो असर पारेन मेरो आत्मविश्वास पनि बढायो । हातमा सिप भएपछि, दुइचार पैसा हाता पर्दो रैछ । हातमा पैसा भयो भने नयाँ आत्मबद आउँदो रैछ । मैले ५९ मा एसलसी दिए पनि ६६ को वैशाखमा नयाँ कक्षा ज्वाइ गरेँ ।
अहिले आत्मबल बढेको छ । जिल्ला बन कार्यलयमा मान्छे चाहिएको सामाजिक परिचालकको रूपमा पनि केही समय काम गरेँ । त्यसले मेरो पकेट केही भएपनि दह्रो बनाउँथ्यो ।
फाटेको कपडा टाल्दै गएपछि सिलाउन आउँछरे । जिन्दगी पनि लड्दै गएपछि जिउन आउँदो रहेछ, मैले यहि सिकेँ । आँट नै सबै भन्दा ठूलो कुरा रहेछ । अहिले त बाख्रै पालेर भएपनि धेरै कमाउन सक्छु झै लाग्छ । मेरो बिचार यहि हो, जगिर खोज्दै हिड्न नपरोस्, जागिरले खोज्दै आवोस् ।
(Wrote after meeting with her in 2010 @Bhabasagar)